हाम्रो कार्यक्रमको उद्धेश्य मलेशियामा रहेका आप्रवासी नेपालीबीच शान्ति र सद्धभाव कायम राख्नु होः अर्जुन विक :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
भानुभक्त आचार्य, मलेशिया
आप्रवासी नेपालीवीच शान्ति र सद्धभाव कायम राख्न मलेसियास्थित पेनाङका विभिन्न सहरहरुमा साङ्गितिक कार्यक्रम हुदैछ । रकस्टार ग्रुपको आयोजनामा हुन लागेको रकस्टार धमाका टु का विषयमा ग्रुपका कोषाध्यक्ष अर्जुन बिकसंग हेल्लोनेपालकोरिया डट कमलाई पत्रकार भानुभक्त आचार्यले गर्नु भएको कुराकानी ।
१) मलेसियामा साङ्गितिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनु हुन्छ । मुल उदेश्य के हो ?
अर्जुनः मलेसियामा करिब १० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ । बिस्वमै सबै भन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको रास्ट्र पनि मलेसियानै हो । याहा सबै जसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा नेपाली भेटिन्छन् । त्यतैकै मात्रामा अन्य स्थानमा पनि । जताततै देखिने नेपालिहरु एकबद्द बनाएर मनोरञ्जन गर्नुनै हाम्रो मुल उदेश्य हो ।
२) मलेसिया नेपाली कामदारको लागि सुरक्षीत छैन भनिन्छ । असुरक्षाका बिच मनोरञ्जन कसरी होला ?
अर्जुनःहजुरको कुरामा म पुर्ण सहमत छु । अन्य राष्ट्रको दाजोमा मलेसियामा केहि जोखिम पक्कै छन । अहिले सामाजिक संजालहरुमा देखिने बीभत्स तस्बिर र दृश्य सबै मलेशियाका हुन् भन्न सकिन्न तर यहाँ ती भन्दा दर्दनाक पिडा पाउने हरु पनि छन । प्रत्येक दिन जसो कहि न कहि कतै न कतै दुखत खबर सुन्नु पर्छ । अब त नियती जस्तै बनी सक्यो । हाम्रो यस कार्यक्रमको अर्को उदेश्य जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति हामिले अपनाउनु पर्ने सचेतना को विषयमा जानकरी दिनु पनि हो । कार्यक्रमको बिचमा मनोरञ्जनात्मक शैलिमा नेपाली कामदार कसरी सुरक्षीत रहने भन्ने विषयमा पनि चेतना दिनेछौ ।
३) नेपाल बाहिर कार्यक्रम गर्न पक्कै पनि ठुलो रकमको आवस्यक पर्छ । लगानी कसरी जुटाउदै हुनुहुन्छ ?
अर्जुनः हुन त नेपाल भित्र जती सहज छैन नेपाल बाहिर कार्यक्रम आयोजना गर्न । त्यसमा पनि मलेसिया । तर नेपालिहरुको अपार माया र साथले हामिले यो कार्यक्रमको लागि तयारी सुरु गरेका हौ । हाम्रो एउटा रक्स्टार ग्रुप छ ।जसमा म लगाएत १७ जना साथीहरु छौ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट कामको सिलसिलामा यहाँ आएका नेपालीहरुको समूह हो रक्स्टार ग्रुप । बिगत देखिनै हामिले साङ्गितिक कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौ । तर नेपाल बाट कलाकार निम्त्याएर ठुलो लगानिमा आयोजना गर्न लगेको यो नै पहिलो कार्यक्रम हो । अहिले सदस्यहरु बाट केही रकम संकलन गरेका छौ । केही हाम्रा सहयोगी हरु हुनुहुन्छ । खासमा मलेसिया स्थित पेनाङ्का कार्यक्रम स्थाल वरपर रहनु भएका नेपाली होटेल ब्यवसाहीहरु । र केही कार्यक्रम पुर्ब टिकट बिक्रि बाट रकम संकलन गरेका छौ । तयारिकै अवस्थामा राम्रा प्रतिक्रिया पाइरहेका छौ । त्यसैले कार्यक्रम सफल हुनेमा बिस्वस्त छौ ।
४) नेपालबाट को को कलाकार निम्त्याउनु भएको छ? कस्तो प्रस्तुति रहनेछ ?
अर्जुनः नेपाली गायन क्षेत्रका चर्चित हस्ती जसलाइ ुराई इज किङु पनि भनिन्छ । राजेश पायल राईको विशेष प्रस्तुति रहनेछ । त्यसैगरी हास्यकलाकार जितु नेपाल ुमुन्द्रेु को पनि खास प्रस्तुति रहनेछ । लोक दोहोरि गायिका सिर्जु अधिकारी, चलचित्र अभिनेत्री तथा चर्चित मोडल चन्दा दाहाल पनि आउदै हुनुहुन्छ । साथमा नृत्य निर्देशक तथा हस्य कलाकार पेमा लामाको पनि बेजोड प्रस्तुति रहेको छ । अन्य यसै क्षेत्रका कलाकारहरु पनि हुनुहुन्छ । लोक दोहरी, हास्य प्रस्तुती, लोक पप र आधुनिक गितको मज्जा संगै नृत्य पनि हुनेछ । साथमा नेपाली कामदारको लागि चेतनामुलक सामग्री ।
५) मलेसियास्थित पेनाङ्का विभिन्न शहरका कार्यक्रम हुने भनिएको छ । कहाँ कहाँ आयोजना हुदैछ र तयारी कस्तो छ ?
चिनिया नया बर्षको अवसर परेर कार्यक्रम गर्दैछौ । जुन बेला अधिकाम्स नेपाली बिदा पर्दछ । फेब्रुअरी ७ मा सुंगाई पतानी (एस पि) को देवान हल पेनाङ् , फेब्रुअरी ८ मा बुकिट जम्बुल पेनाङ् र फेब्रुअरी ९ मा पेनाङ्कै बिएम स्थित देवान हलमा आयोजना गर्दैछौ । तयरी तीब्र गतिमा बढी रहेको छ । पोस्टर सर्बजनिक गरिसकेका छौ । टिकट बितरण पनि चालू छ । धेरै भन्दा धेरै नेपालिको उपस्थितीका लागि अहिले हामि सबै प्रचार प्रसारमा केन्द्रित छौ ।
६) अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
अर्जुनः मलेशियामा कार्यक्रम आयोजना गर्न त्यही सहज छैन तर पनि सबैको अपार माया र साथले यो जमर्को गरेका छौ । नेपालीहरु बढी सङ्ख्यामा रहेकै स्थानहरु छनोट गरि हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका हौ त्यसैले पनि कार्यक्रम प्रभबकारि बन्नेमा बिस्वस्त छौ । सधै कामको तनबमा रहने नेपालिहरुलाइ मनोरंजनका साथै एक अर्का बिच खुशी बाड्न कार्यक्रम आयोजना गरिदैछ । आफ्नो नजिको स्थानमा गएर कार्यक्रम हेरि मनोरंजन लिन आग्रह गर्दछु । टिकटको मुल्य ३० रिंगेट तोकेका छौ । यसपटक कार्यक्रम हेरेर सल्लाह सुझाव दिएर हामिलाइ उर्जा थपिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ । हाम्रो कुरा आम नेपाली सम्म पुर्याउनु सहयोग गर्नु भएकोमा तपाइँलाई पनि धन्यवाद अनि विशेष धन्यवाद हेल्लोनेपालकोरिया डट कमलाइ पनि ।
प्रकाशित मिति : २०७२ माघ ०५ (January 19, 2016)